QARSOODIGA AH EE SII KORDHAYA PERENNIAL GEEDKA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Primula - ubax ka soo jeeda qoysaska asaasiga ah. Tani waa warshad dilka ah, ubaxyada guga hore. In ka badan 500 nooc oo asalosus ah ayaa la og yahay in ay ku badan yihiin aagaga kala duwan: kaymaha, bannaanka, dhulalka buuraha, xaaladda ugu weyn ee qaybinta waa ciid qoyan oo hodan ah.
Noocyada caanka ah ee caleemaha asaasiga ah
In jardiinooyin, noocyo hybrid ayaa inta badan koray, mararka qaarkood duurjoogta. Kuwa ugu caansan waa kuwan soo socda:
Primula caadi - waxay ku koraan Crimea iyo Caucasus. Ubaxadu waa cagaar leh xarun guduudan, caleemaha waa weyn, cagaar cagaaran, jir gaaban. Blooms dhamaadka Abriil.
Spring Primula - ubaxyo waa dhalaalaya, oo leh xarun liimi ah oo ku taal bartamaha, dallad-darrada. Blossoms bil gudaheeda, laga bilaabo dhammaadka Abriil. Beelaha ugu caansan ee leh ballaaran, ubaxyo labanlaab oo kala duwan.
Primula auricular - waxay jecel yihiin nus-hoose. Kobcinta noocyada iyo Beelaha, inta badan laba-midab leh. Duufaan duufaan, ubaxyada May-June, Blooms ka yar bil.
Primula pubescent - isugeyn ka mid ah auricular. Ubax waa weyn, qurux badan, caan u ah madow midab madow.
Primula waa mid si fiican u caday - duufaanku wuxuu u eg yahay kubad, ubaxu waa guduud, casaan, guduud, mugdi madow, marar badan oo caddaan ah. Blossoms bil gudaheed bishii dhexdeeda. Xilliga xagaaga ka dib ubax, waxay u eg tahay fern.
Primula sare - ubaxyo cirro leh, oo leh dhexda madow. Blossoms ee April-May, Blooms ka badan bil. Qajaar dheeraadka ah wuxuu leeyahay biirka kala duwan ee midabada kala duwan.
Primula Kortuzovidnaya - ubaxyo casaan ah, midab buluug ah, ayaa lagu ururiyaa dallad dhejis ah. Caleemaha waa qoyan yihiin, qoyan, oo leh dharka. Blossoms laba jeer - May iyo August - September.
Yulia's primula waa noocyo yar yar oo kaliya 10 cm oo sarreeya Bishii Abriil, ubaxyo casaan-guduud ah ayaa barata ilaa bartamihii May. Tani waa mid ka mid ah noocyada sii kordhaya meelaha bannaan.
Goobidda iyo daryeelka xajmiga
Qodobka dilka dilka ah marka la beero waxa uu u baahan yahay u hoggaansamida xeerar dhowr ah, isla sidaasna waxay khuseysaa daryeelka ubaxa.
Goobta saxda ah ee beerto - fure u ah ubax guuleysta iyo mudnaanta dheer ee asaasiga ah. Geedkani wuxuu doorbidaa meelo yar oo har leh, oo si fiican u hawoqonaya isla mar. Waxaad iyaga ku beeran kartaa geedka miro ama geed, taas oo caleemaha dambe ee caleenta.
Meelaha bannaan ee qorraxda, caleenta beerta ayaa dareensan raaxo la'aan. Waxuu ubaxaa sida caadiga ah, laakiin dhexda dhexe ee xagaaga caleemaha qallalan, iyo xilliga dayrta dhirta uu noqdo mid aad u tabarucaya oo aan la barbarin sanadka soo socda.
Ma taqaanaa? Waxaa jira halyeey kusaabsan asalka asalka ah. Rasuulkii Butros, isagoo ogaaday in jinniyadii ka soo horjeeday jannadu ay fureen furayaasha albaabbada jannada, waxay hoos u dhigeen keykini. Meesha ay ubaxyada ubaxa ku koraan. Wakhti dheer, qashinka waxaa loo yaqaan furayaasha Petrov.
Ka hor intaan la beeri, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro humus ama compost si aad u ciidda, bacriminta macdanta iyo qodo ciidda si qoto dheer ah ugu yaraan 30 cm Haddii aad leedahay loamy carrada on qotoda, ku dar ciid.
Waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo abuuro macaan. Noocyada cabbirka dhexdhexaad ah waa in lagu beeraa fogaan ah 30 cm, kuwa waaweyn - 40-50 cm. Waraabinta waxaa loo sameeyaa si joogto ah, si ay ciidda had iyo jeer biyaha ku filan. Ka dib markii waraabiyo ciidda u baahan tahay si loo dabciyo iyo mulch.
Intii lagu guda jiray horumarinta, caanuhu waxay si fiican uga jawaabaan hordhaca shimbiraha. Inta lagu jiro ubax, bacriminta loogu talagalay xajmiga waa suurad wacan oo laga helo potash, fosfooraska iyo xeryaha nitrogen. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu quudiyo saddex jeer: guga, bilowga xagaaga iyo dhammaadka.
Diyaarinta dhirta jiilaalka
Inta badan beerta primroses uma baahnid in la transplanted jiilaalka, laakiin noocyo hybrid yihiin baraf u adkaysta yar. Waxaa lagula talinayaa in la qodo oo laga saaro kaydinta qaboobaha qolka.
Dhirta loo yaqaan "frost-resistantant" waxaa loo diyaariyaa sida soo socota: dhamaadka xilliga dayrta, ku dar humus hoos duurka. Tani waxay ilaalinaysaa nidaamka xididada dhirta laga soo qaado. Haddii aanay jirin baraf ku filan gobolkaaga, waa in la daboolaa laamood.
Waa muhiim! Waa suurtagal in la jeexo caleemaha dhirta xilliga dayrta: caleemaha waa ilaalinta dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo dabeysha. Gooyo waxaa lagula talinayaa guga hore.
Doorashooyinka taranta ee hormarinta
Ka hor intaan la cunin caleemo qoyan, tixgelin labo dabeecadood. Marka la faafiyo miraha, ubaxyada duurjoogta ah ee koraya waxay leeyihiin sifooyin kasta, iyo Beelaha beerta leh habkan uma gudbaan guryaha. Sidaa darteed, noocyada dhirta hybrid ayaa si wanaagsan ugu faafay dhirta.
Beeridda abuurka ah waxay dhacdaa dayrta goor dambe. Seeds waxaa lagu beeray qoto dheer oo ah nus mitir sanduuqyada ama isla markiiba ciidda. On dhulka u furan waxaa lagu beeray karaa guga.
Caleemaha oo leh laba ama saddex caleemo ayaa lagu beeray fogaan ah 15 cm. Muddo ka dib, dhirta koray waxaa lagu beeray meel shady ah muddo wakhti joogta ah.
Caleemaha waxay u baahan yihiin waraabin joogto ah.
Digniin! Caadi ahaan koritaanka abuurka, koriinkarro badan oo u baahan daryeel dheeraad ah. Tani waa in la tixgeliyaa marka la bilaabayo abuurista abuurka ee asaasiga.
Aynu ogaanno sida loo koro cayayaanka qabashada. Saldhigga qoorta ee xididka, kala sooc qayb ka mid ah biqil oo leh buraash, caleen iyo buro. Lamina waa la gooyaa kala badh. Boorsada waxaa lagu beeray qaabka loo diyaariyey ee ka kooban ciidda iyo ciidda qaybo siman.
Xaaladaha ugu habboon ee rootingka: Heerka 17ºC, iftiinka wanaagsan, laakiin aan lahayn qorraxda tooska ah, carrada qoyan ee dhexdhexaadka ah. Sida ugu dhakhsaha badan saddexda caleemo ayaa soo baxaya, primula waxaa lagu dhajiyaa dherer leh dhexroor 10 cm.
Haddii aadan garanaynin sida kor loogu qaado qashinka guriga, dheriga, isticmaal habkan. Warshadda waxaa lagu beeray beerta iyada oo leh kululeyn iyo bilawga xaaladaha raaxo leh ee loogu talagalay goobaha furan ee meelaha furan.
Isku qeybinta qaato warshad da'doodu tahay saddex sano, wax yar maahan. Geed wanaagsan oo koraya wuxuu siinayaa ilaa lix qaybood, waa inay leeyihiin xididada si fiican u horumarsan iyo dhowr goor. Fallaha la kala saaray waxaa lagu beeray dayrta xilliga dayrta kahor inta aan la helin miraha ugu horeeya. Xilliga kulaylka adag, delenki waxay u baahan tahay waraabin maalinle ah.
Isticmaalka maadada cayayaanka ee naqshada muuqaalka
Jardiin kasta waxaa jira meel bilaash ah oo lagu qurxin karo rooga midab leh oo ka mid ah asaasiga. Wixii qurxinta ubaxyada, noocyada hybrid ee primroses waxaa loo isticmaalaa: caleenta, guga, abalone iyo dhadhanka calsan. Noocyada kala duwan ayaa lagu kala duwan yahay qaabab kala duwan iyo midabyo, marka lagu daro ubaxyada laba jeer: guga iyo xagaaga.
Si loo abuuro xuduudaha quruxda badan iyo calaacalaha ku habboon polantovaya iyo sare. Dhirta Kuwani waxay leeyihiin inflorescences waaweyn, qurux badan, laakiin waa in lagu beeray meel laga ilaaliyo raajooyinka tooska ah ee qorraxda, ka doorbidaa dhinaca woqooyiga beerta. Haddii kale, muddada ubax yar ayaa la dhimi doonaa, iyo ubaxyada si dhakhso ah u lumin doonaa muuqaalkooda.
Haddii goobtaadu leedahay hannaan kayd ah, hareeraha waxaad ku beeran kartaa xayndaab. Waxaad u baahan tahay inaad doorato noocyo jecel qoyaan badan, tusaale, sikkim primula.
Guryaha bogsashada ee caleemaha
Primula waxaa ku jira qadar badan oo ah ascorbic acid iyo carotene, taas oo ka dhigaysa mid qiimo leh xilliga beriberi. Caleenta caleemaha, ceyriinka, caleenta salad, oo qalalan - lagu darey maraqa iyo suxuunta ugu muhiimsan sida cuncunka. Kaliya dhowr caleemood ayaa ku siin kara qaadashada maalinlaha ah ee fitamiin C qof.
Warshad waxaa loo isticmaalaa daawada dadweynaha sida xanuunka, duriinka, bogsashada iyo wakiilka anti-bararka. Primula waxaa loo isticmaalaa daaweynta cuduro badan, sida:
Colds (rhinitis, tonsillitis, bronchitis, laryngitis, pneumonia);
Jir-dileynta iyo gout;
Madax-xanuun, miyir-beel, neurosis iyo hurdo la'aan;
Cudurka kelyaha, cayilka beerka.
Isticmaalka daawada loo yaqaan 'primrose' sida daawada ayaa ka hortageysa istaroogga iyo weerarada wadnaha. Waxay ka caawisaa dib u soo celinta hormoonnada, adkeeysa derbiyada xididdada dhiigga, waxay ka caawisaa cambaarta, oo leh xanuunada nidaamka dareenka iyo dhibaatooyin kale oo badan. Sannadaha 70aad, saameynta antitumor ee saliidda qiiqa ayaa la helay.
Xiiso leh Giriiggii qadiimiga ahaa, macmacaan ayaa loo yaqaanay ubaxa laba iyo toban ilaah. Sida laga soo xigtay halyeeyada, ilaahyada waxay rabeen inay caawiyaan ninkii dhallinyarada ahaa ee baray curyaanka. Ma garanayo sida loo caawiyo isaga, ilaahyada ayaa u jeestay ubax qurux badan. Tan iyo markaas, hindhisada waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn.
Dhibaatooyinka beerista suurtagalka ah
Dhibaatada ugu weyni waxay tahay in noocyo marmarka qaarkood ay ku kala duwan yihiin shuruudaha daryeelka. Waxaa lagama maarmaan ah in la barto sida loo beero noocyo kala duwan oo asaasiga ah, meesha ay ku taal, waxa ciidda, iyo noocyada nooca ay u baahan yihiin waraabin badan iyo bacarin.
Xannibaadda khaldan ee dhirta ayaa horseedi doonta dhibaatooyinka soo socda: dhicida xididka - qulqulka hawada qabow; ka baxo dhicin - waraabinta ku filan.
Primroses waxay leeyihiin cayayaanka - slugs iyo snails. Cayayaankaasi waxay u baahan yihiin in loo qaado gacanta si ay u daboolaan. Laakiin isla markaasna xusuusnow, dabinaadahaani waxay halis u yihiin xayawaanka.
Ha beeran asxaabta u dhow caleemaha: weewils iyo dirxigooda, cayayaanka ugu muhiimsan ee geedka canabka ah, ha quusin cagaarka hodanka ah ee primroses. Dirxiga ayaa ku fekeraya xididada, sidaas darteed way adagtahay in laga takhaluso. Kaliya daaweynta kiimikada ee dhirta ayaa caawin doonta.
Inkastoo dhibaatooyinka, caleenta waa mid ka mid ah dhirta ugu jecel ee bannaanka. Sidaa darteed, waxay la yimaadaan magacyo kala duwan oo loogu talagalay iyaga - furayaasha, taliyayaasha, farxadaha khaas ah iyo kuwa kale.